Nigadra 1000 Andro ny Mpanao Gazety Etiopiana Reeyot Alemu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2014 17:17 GMT
Vakio amin'ny teny አማርኛ, Español, বাংলা, Français, English, Swahili, Italiano, 日本語, English
Feno arivo andro tamin'ny 16 Martsa teo no andro nampidirana am-ponja an'ilay mpanao gazety Ethiopiana Reeyot Alemu. Manefa sazy mandritra ny dimy taona izy rehefa voapanga ho manao fampihororohoana tamin'ny Janoary 2012.
Izy no Reeyot Alemu, mpanao gazety etiopiana. Saripika avy ao amin'ny pejy facebook n'ireo Mpanohana an'i Reeyout Alemu.
Mpampianatra teny anglisy i Reeyot ary nahazo loka eran-tany amin'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety Guillermo Cano an'ny UNESCO, loka Hellman/Hammett, ary lokam-pahasahiana eo amin'ny asa fanaovan-gazety avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenen'ny fanaovan-gazety hoan'ny vehivavy.
Araka ny tatitry ny Komity mpiaro ny mpanao gazety (CPJ), dia efa hatramin'ny taona 2011 no nanameloka mpanao gazety miisa 11 sy bilaogera mahaleotena ny governemanta Ethiopiana, ka isan'izany Reeyot sy Eskinder Nega noho ny lalàna mivelatra miady amin'ny fampihorohoroana. Ao anatin'ireo voagadra dia ahitana mpanao gazety soedoà roa nahazo fanamelohana 11 taona noho ny filazana fa manao fanohanana tsy ara-dalàna ilay hetsika fikomian'ny foko Somali.
Ato anatin'ity lahatsoratra ity, dia mitantara ny toe-piainan'ireo mpanao gazety Etiopiana nigadra, ny bilaogera BefeQadu Z Hailu:
Raha ny hanitsy ireo voaheloka no tanjona amin'ity fanagadrana ity, noho izany dia iray amin'ireo fitaovana hampahomby an'izany ny fandrisihana ny famakiam-boky sy ny fanabeazana. Azo atao ireto roa ireto any amin'ny fonjan'ny Kality saingy tsy mora kosa ho an'ireo mpanao gazety sy ireo hafa izay voampanga ho manao fampihorohorona.
Voarara tsy hamaky boky ireto gadra ireto. “Voarara manokana amin'izany ireo boky izay mampifandray ny teny hoe “Ethiopia” sy “Tantara”; hoy i Eskinder. Marina izany ho an'ny sampana misy an'i Reeyot Alemu, sy ireo hafa koa toa an'i Wubshet Taye, Bekele Gerba, sns..
Tsy mahazo ampidirina any toy izany ihany koa ireo gazety sy boky mahaleotena; Nanazava tamiko ihany koa i Eskinder fa voarara ny fijerena ny fahitalavitra mpampita vaovao toy ny BBC sy Aljazeera any amin'ny faritra namonjana azy ireo, .
Reeyot Alemu kosa ankehitriny, taorian'ny ady mafy tamin'ny mpitantana ny fonja sy ny famoahana amin'ny media ny tantarany, dia nahazo alalana manohy fianarana an-davitra. Saingy mbola tojo fahasahiranana ihany anefa amiin'ny fahazoana boky hafa ankoatra izay alefan'ny anjerimanontolo aminy mivantana.
Naneho ny firaisankinany tamin'ilay mpanao gazety voafonja tamin'ny alalan'ny diezy kosa ireo mpampiasa Twitter. Indreto sioka vitsivitsy :
Manantena aho fa miahy azy ihany koa izao tontolo izao! Miandry fanohanana hatrany izahay ! MT @LisaMisol: Ilay mpanao gazety #ReeyotAlemu 1000 andro any am-ponja
Manohy amin'ny fampisehoana ny tahony sy hakanosany ny governemanta EPRDFn'ny Etiopia, satria dia nampitahotra nampivaloarika azy ny mpanao gazety toa an'i Reeyot Alemu. Afaho Izy!
Fa nahoana kay no ny mpanao gazety no atahoran'ireo mpanao didy jadona amin'ny firenena andalam-pandrosoana kokoa mihoatra noho ny fahafatesana? Mariky ny fahosana. Matahotra hevitra sy olona manan-kevitra ireo!
Ethiopia : Arivo andro an-tranomaizina androany ilay mpanao gazety Reeyot Alemu. Voarara ny fitsidihan'ny fianakaviany; fa nahoana no mangina i Ashton?
March16 marks 1000 days of imprisonment of #ReeyotAlemu & clarifies #ethiopia rule by dictate, injustice & oppression @AnaGomesMEP@amnesty — EPHREM SHAUL (@eph_sh) March 15, 2014
Feno arivo andro ny 16 Martsa ny nitazonana an-tranomaizina an'i Reeyot Alemu, ary izany no manaporofo fa eo ambanin'ny didy jadona, tsy rariny, ary tsindrihazolena i Etiopia
Ethiopia : Tsy fampihorohoroana ny fanaovan-gazety, Afaho I Reeyot Alemu, efa nahazo loka tamin'ny fanaovan-gazety, omeo ireo fitsaboana sahaza azy.